United Airlines inowedzera kubatana neCopa neAvianca
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines inowedzera kubatana neCopa neAvianca
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Panama News • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Colombia Breaking News • ushanyi • kutakura
United Airlines nhasi yazivisa kuti yasvika pachibvumirano neCompañía Panameña de Aviación SA (Copa), Aerovías del Continente Americano SA (Avianca) nevamwe vazhinji veAvianca, pachibvumirano chebhizimusi rakabatana (JBA) icho, zvichimirira mvumo yehurumende, chinotarisirwa inopa zvakanakira vatengi, nharaunda uye musika wekufamba nendege pakati peUnited States nenyika 19 muCentral neSouth America.
Zvimwe zvakawanda sarudzo dzevatengi
Nekubatanidza yavo inowirirana nzira netiweki mumubatanidzwa wemari-yekugovana JBA, United, Avianca neCopa kuronga kupa vatengi akawanda mabhenefiti, kusanganisira:
• Yakabatana, isina musono sevhisi mune anopfuura gumi nemaviri zviuru zviviri zveguta
• Nzira itsva dzisingamiri
• Dzimwe ndege pamusoro penzira dziripo
• Yakaderedzwa nguva dzekufamba
Dzinga mabhenefiti ehupfumi kune vatengi uye nharaunda dzatinoshandira
Vatakuri vanotarisira kuti iyo JBA ityaire kwakakura traffic kukura pamasuo makuru maguta mahombekombe kuenda kumahombekombe, ayo anotarisirwa kubatsira kuunza mari nyowani nekugadzira mikana yakawanda yekusimudzira hupfumi. Kupfuurirazve, iyo JBA inotarisirwa kupa vatengi nzira dzakawedzerwa dzekukodha ndege, kukwikwidza fares, ruzivo rwekufamba rwakadzikama uye basa riri nani revatengi, zvichikonzera kukosha kwakaratidzwa kwevatengi.
Zvirinani kushandira vatengi vedu
Pamusoro pezvo, kubvumira vatakuri vatatu kushandira vatengi sekunge yaive imwe ndege yendege inotarisirwa kugonesa makambani kuenzanisa zvirinani zvirongwa zvavo zvemapepa, kurongedza marongero enhandare uye kugadzirisa zvivakwa zveairport.
"Chibvumirano ichi chinomiririra chitsauko chinotevera mukufamba nendege kweUS-Latin America," akadaro Scott Kirby, mutungamiri weUnited. "Tiri kufara kushanda nevamwe vedu veStar Alliance Avianca neCopa kuunza kukwikwidza kunodiwa uye kukura kumisika zhinji isina kuchengetwa tichipa ruzivo rwakakwana kune vebhizinesi nevanozorora vanofamba muWestern Hemisphere."
"Tinofara kuenderera mberi nekusimbisa kubatana kwedu kuripo neUnited Airlines uye tinotarisira kuwedzera sarudzo dzevashandi vedu nekushanda pamwe chete neAvianca," akadaro Pedro Heilbron, mukuru mukuru weCopa Airlines. "Tinotenda kuti chibvumirano ichi chinobatsira vatakuri vedu nekuvapa mari yekukwikwidza uye netiweki yepamusoro yenzvimbo dzinopfuura 275 muLatin America neUS, uye inosimudzira kuwedzera nekuvandudza mukati meindasitiri yendege muAmerica."
"Tine chokwadi chekuti pamwe chete takasimba muUnited States - Latin America musika kupfuura chero ipi yendege nhatu," akadaro Hernan Rincon, mutungamiri mukuru weAvianca - mukuru mukuru. "Kubatana uku kuchaita kuti Avianca isimbise chinzvimbo chayo semutambi-wekutanga muindasitiri yendege muAmerica sezvo isu tichawedzera nzvimbo yedu mukondinendi neUnited neCopa, zvichipa kubatana kwakanaka kune vatengi vedu."
JBAs kutyaira makwikwi ayo anobatsira vatengi
Kunyangwe maJBAs aratidzwa kutenderera pasirese kubatsira vatengi uye kusimudzira kukwikwidza, parizvino 99 muzana yevatakuri vatakuri veUS vanoita kubatana muCentral neSouth America vanozviita vasina JBA. Makwikwi mumusika weUS-Latin America wakura uye unosanganisira seti dzakasiyana dzevatakuri vanopa sevhisi pamitengo yakawanda yemitengo. Asi musika hauna huwandu hwekugovana mari, simbi-isina kwazvakarerekera network yevatakuri uye dzakabatana dzakakwidziridzwa masimba emakwikwi anotyaira kukosha uye zvirinani zviitiko zvevatengi. Iyo JBA inomiririra hunyanzvi, hwakanakisa-mukirasi nyowani chigadzirwa chinopa icho chichaita kukwikwidza mumusika uyu wakasimba kutosimba.
"Ongororo yedu inoratidza kuti JBA yesimbi-isina kwayakarerekera pakati peUnited, Copa neAvianca ichapa mabhenefiti akakura kune vatengi vanofamba pakati penyika dzakakodzera," akadaro Dr. Darin Lee, mutevedzeri wemutevedzeri wemutungamiri wekambani inowona nezvehupfumi yeCompass Lexecon uye nyanzvi yemakambani enhandare yendege. "JBA iyi ichaita kuti United, Copa neAvianca vakwikwidze zvine mutsindo, vape mari yekukwikwidza, uye vawedzere basa, vachikurudzira hunyanzvi nekuvaka musika wakasimba uye une simba."
Kugonesa kubatana kwakadzika kunodiwa kuendesa mabhenefiti aya kune vatengi, nharaunda nemusika, United, Copa neAvianca kuronga kunyorera munguva iripedyo yekubvumidzwa kwekutonga kweJBA uye inopihwa rubatsiro rwekudzivirira hutachiona kubva kuUS department reZvekufambisa uye mamwe masangano anomiririra. Mapato haana kuronga kuita zvizere JBA kudzamara vagamuchira mvumo dzakakodzera dzehurumende. Iyo JBA parizvino inosanganisira kubatana pakati peUS neCentral neSouth America, kusanganisa Brazil. Nechibvumirano chazvino chapera cheOpen Skies pakati peUS neBrazil, vatakuri vari kutsvaga mukana wekuwedzera Brazil kuJBA.
Dutu rine simba rinoparadza misha, rinokuvadza mazana ...
Mutongi anorova CDC 'mamiriro ...